Mogadishu Journal » Dagaal labo maleeshiyo beelleed ku dhaxmaray degmada Caabudwaaq
Dagaal labo maleeshiyo beelleed ku dhaxmaray degmada Caabudwaaq
Mjournal :-Wararka xiligan ka imanaya degmada Caabud-waaq ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in galabta casir liiqii uu halkaa ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya labo maleeshiyo beelleed.
Dagaalka galabta halkaa ka qarxay ayaa salka ku haya aano qabiil, waxaana uu sababay dhimashada shan ruux halka tiro kale oo intaa ka badanna dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen.
Dad ku sugan Caabud-waaq ayaa sheegay in dagaalka galabta uu ka dhacay kadib garab ka mid ah dhinacyada iska soo horjeeda dileen qof ka soo jeeda dhinaca, taasoo keentay in dagaalka uu halkaa ka qarxo.
Ugu danbeyntii, dagaalka ayaa imanaya xili dhawaan hishiis laga gaaray beelo horay halkaa ugu dagaalamay.
Madaxda Qaranka oo hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee loo doortay baarlamaanka
Somalia lawmakers choose speaker for new parliament